Nusraat Jaahan Raafi: Murtoo du'aa namoota 16 du'a barattuuf sababa ta'anirratti - BBC News Afaan Oromoo
Nusraat Jaahan Raafi: Murtoo du'aa namoota 16 du'a barattuuf sababa ta'anirratti
Nusraat gaazii biidaan akka gubattee duutu taasifamte.
Manni murtii Baangilaadish namoota du'a shamarree baratuu barsiisaa qoccoollaa saalaa narraan gahee jechuun himachuusheetiif akka abidaan gubbattee duutuu taatee keessaa harka qabu jedhan 16 addabbii du'aa irratti murteesseera.
Nusraat Jaahaan Raafi, shamarree waggaa 19, baatii Ebilaa keessa magaalaa xiqqoo Fenii jedhamtu fi magaalaa guddoo Daakaa irraa fageenya km160 irratti argamtu keessatti ajjeefamte.
Barsiisaan duree Nusraat fi hirriyoota shee lama irraatti qoccoollaa saalaa raawwachu himattee turte.
Ajjeechaan isheerratti raawwatamees kan hawaasicha naasisee yoo ta'u, Nusraatiif haqa barbaachas hiriira walitti fufaatu taasifamaa ture.
Dhadhachis biyyattii himannaan waggoota itti fudhatu keessatti haala baayyee saffiisaa ta'een murteerra gahame. Abbaan seeraa Haafez Ahimad gaazexessitootatti akka himaniitti, Baangilaadishiitti namni kamiiyyuu yakka ajjeechaa jalaa akka hinbaane mirkanaa'eera jedhaniiru.
Abbookaatoowwan himatantootaa garuu ol iyyanna jedhaniiru.
Qorannoon haala ajjeechaa Nusraat irratti gaggeefamee akka ibseetti, gochiichi kan raawwatame isheefi hiriyyoota ishee akka callisan kan namoota dhaggeetti hawaasaa qabaniin raawwatameedha.
barsiisaa duree Siraaj Ud Doulaa dabalatee, barsiiftoota sadii, kanneen poolisiin akka shamarreen tun mana hidhaatti ajjeefamtuuf ajajaniiru jedhaan mana murtiitti balleessitoota ta'un argamaniiru. Dhaddacha Kamisa taa'ee kanaanis akkasumas namoonni biraa lamas, ooggantoota paartii Leeguu Awaami naannichaa kan ta'anis balleessitoota ta'un argamaniiru.
Poolisoonni naannichaa hedduunis Nusraat ofiin of ajjeeste jechuudhaan oddeeffannoo sobaa tamsaasuun wal ta'anii turan.
Maatiin Nusraat poolisoonni waan dahannoo kennaniif jecha murtee isheen gara poolisii deebiite akka deemtuuf deeggaranii akka turanis midiyaaleen biyyattii gabaasaniiru.
Isaanis himannicha simachuun murteen attatammaan akka dabarfamuuf hojatqa turan.
Nusraatiin maaltu mudate?
Isheenis barsiisaashee poolisiitti erga himatteen guyyoota 11 booda, gaafa Ebla 6 waniti hineegamne mudateen.
Nusraat namoota afuur ykn shan kan uffata 'burgas' jedhamu uffataniin marfamte. Achinis akka iyyannoo ishee dhiisitu dhiibbaa irratti taasisan.
Isheenis didnaan abida itti qabsiisan.
Poolisiin akka jedheettis, ofiin akka ofi ajjeessite fakkeessu barbaadanii turan. Garuu harkaa bahuun deegarsa argachu dandeesse.
balaa irra qaqabeen miidhaa olaanaan waan irra gaheef obbolleessa ishee waliin yaada kennitee bilbilaan waraabsiifte.
"Barsiisichi na tuqee. yakka kanas hanga dhumaatti nan falma,'' jechuun warra ishee miidhaan tokko tokko maqaa caqasite turte.
Nusraat, kan qaama ishee keessaa %80 gubate guyyoota afuriin booda Ebla 10tti duute.
Baangilaadish keessa qoccoollaan saalaa hangam babalatee?
Qoccollaan saalaa Baangilaadish keessatti eddoo itti barame fakkaata. gabaasni dhiheenya kana dhaabbata 'ActionAid' jedhamuun ifa ta'e tokkoos dubartoonni warshaa uccuu keessa hojjatan hark 80 bakka hojiisaaniiti qoccoollaa saalaa mudateera ykn yaalamaniiru.
Haa ta'u malee, akka Nusraat kan ifatti bahee waa'ee dhimma qoccoollaa dubbatu waaan baramee miti. Yoo bahanii kan dubbatan ta'ee hawaasuma isaanii irraa deebiisee miidhaan waan irratti raawwatamuuf callisu fialatam ture.
Nusraat keessumattuu adda turte sababii ofumaan gara buufata poolisii deemteef. Isaanis jecha ishee bilbila irratti waraaban booda midiyaaf dabarfame kenname.
haaluma walfakkaatunis, barsiisichi akka hidhaadhaa hiikamu gaafachuuf namoonni daandiitti baanaan nageenya maatii isheetiif sodaan uumame ture.
Namoonni ajjeechaa Nusraat attamiin dhagahan?
Dhimmichi Baangilaadhish guutuutti kan kakaase yoo ta'u, namoota balaa qoccoolaatiin miidhamtoota taaniif ifa banuu eegale ture.
MM Baanglaadishi Sheikh Haasinaa ifatti "kanneen harka keessaa qaban kammiyyuu akka tarkaanfii seeraa jalaa hin baane'' gaafatanii rute.
Poolisiin jalqaba immannaa qoccoolaa saalaa haqee turees, amma namoota 16 irratti caamsaa keessa himannaa bane. Abbootiin seeraas murtee du'aatiif gaafataa jiru.
Namoonni Baangilaadeshitti dubartii osoo lubbuun jirtuu ibiddaan guban 16 himataman
30 Caamsaa 2019
Baangiladish: Misirroo hamaamota waliin heerumuuf mana misirrichaa deemte